သင်္ကြန်သံချပ်ဖျော်ဖြေရေး ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းတွင် နေရာပေးကာ ထိုက်တန်သောဆု ချီးမြှင့်ရန် ရန်? - Yangon Media Group
သင်္ကြန်သံချပ်ဖျော်ဖြေရေး ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းတွင် နေရာပေးကာ ထိုက်တန်သောဆု ချီးမြှင့်ရန် ရန်?
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၉ – သင်္ကြန် ကာလအတွင်း သံချပ်အဖွဲ့များ၏ဖျော်ဖြေမှုကို တာမွေမြို့နယ် ဗိုလ် စိန်မှန်အားကစားကွင်းတွင် နေရာ ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုက်တန်သောဆု ငွေများချီးမြှင့်နိုင်ရန် ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ကစီစဉ်နေကြောင်း သိ ရသည်။
ယခင်နှစ်များက သံချပ်အဖွဲ့ များသည် ပုဂ္ဂလိကမဏ္ဍပ်များတွင် သံချပ်ဖျော်ဖြေမှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် ဗိုလ်စိန် မှန်ကွင်းတွင် သင်္ကြန်အဖွဲ့များဖျော် ဖြေနိုင်ရန် နေရာစီစဉ်နေသကဲ့သို့ ထိုက်တန်သောဆုငွေများ ချီးမြှင့် နိုင်ရေးအတွက်လည်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ စီစဉ် နေကြောင်း သိရသည်။
“”သံချပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် ခမ်းခမ်းနားနားလုပ်ရင် ကျပ်သိန်း၃၀ဝလောက် ကုန်တယ်။ သေးသေးလုပ်ရင် ကျပ်သိန်း ၁၀ဝ လောက်ကုန်တယ်။ ဆုရတာနဲ့မကိုက် ဘဲ အမြဲရှုံးနေတော့ ခုသံချပ်ကမျိုး သုဉ်းလုနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ ကြာရင်သံ ချပ်ဆိုတာ ပျောက်သွားမယ်။ ဒါ ကြောင့် ဒီနှစ်မှာ သံချပ်အဖွဲ့တွေ ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆုချီးမြှင့်ဖို့ ဘတ်ဂျက်တွက်နေတယ်။ ဗိုလ်စိန် မှန်ကွင်းမှာ သံချပ်အဖွဲ့သက်သက် ဖျော်ဖြေနိုင်ရေး နေရာသတ်မှတ်ပေး ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်””ဟု မဟာ သင်္ကြန် သီချင်း၊ သံချပ်စိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးဇော်အေးမောင်က မတ် ၂၉ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များတွင် ဖျော် ဖြေမည့်သံချပ်စာသားများကို ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရထံ ခွင့်ပြု ချက်တင်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် မတ် ၁၉ ရက်မှ ဧပြီ ၁ရက်အထိ သံချပ်အဖွဲ့ များက စာသားများ လာရောက်တင် ပြရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာ မတ် ၂၉ရက် အထိ သံချပ် ၁၀ ဖွဲ့ လာရောက်တင် ပြထားကြောင်း သိရသည်။
သံချပ်စာသားများကို စိစစ်ရေး ကော်မတီမှ ၁၅ဦးက စိစစ်မည်ဖြစ် ပြီး မင်နီတားခံရနိုင်မည့်သတ်မှတ် ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့် မကိုက်ညီသည့် သံချပ်စာသားများ ပါဝင်ပါက ယင်းသံချပ်အဖွဲ့ကိုခေါ် ယူကာ ဝိုင်းဝန်းတိုင်ပင်၍ စာသား များကိုပြုပြင်ပြီးမှသာ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဝန်ကြီးဦးဇော် အေးမောင်က””သံချပ်ဆိုတာ မြန်မာ့ ရိုးရာဓလေ့တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် မရှိလို့မဖြစ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေ စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်စေနိုင်မယ့် စာသားတွေ အပြုသဘောဆောင် တဲ့စာသားတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတာကိုကြို ဆိုပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ထိ ပါးတာတို့၊ ယုတ်မာကြမ်းတမ်းတဲ့ စာသားတွေ၊ မောင်နဲ့နှမမကြားဝံ့ မနာသာတဲ့ စာသားတွေပါဝင်လာ ခြင်းမရှိအောင်သာ ကျွန်တော်တို့ က စိစစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်””ဟု ပြောသည်။ယမန်နှစ် သင်္ကြန်ကာလ မဏ္ဍပ်များတွင် ဖျော်ဖြေမည့်သံချပ် အဖွဲ့၄၀ကို စာသားများ စိစစ်ကာ ဖျော်ဖြေခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။
အောင်လံ၌ ရိုးရာသင်္ကြန်တွင်အသုံးပြုသော တံခွန်ကုက္ကားလုပ်သူများလျော့နည်းလာ
မန်ယူအသင်းနည်းပြဟောင်း ဗန်ဟားလ်၏ ဝေဖန်မှုအပေါ် ဂယ်ရီနဗီး တုံ့ပြန်
အလုပ်ထုတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံရန် အမျိုးသမီး အလုပ်သမ
ယက္ကန်း စင်တောင်ကို ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော အဖြစ် ဖွဲ့စည်းမည်
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆစ်ဒနီ၌ ပြည်သူများနှင့် မိန့်ခွန်ြးေ?
ထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့မည့် ”ဝ” ဥအမှုန့်ကြိတ် ကုန်ကြမ်းထုတ် စက်ရုံတစ်ရုံ မြဝတီ စီးပွားရေး??
အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူများက မိမိတို့ ဆန္ဒပြမှုများကို ဟောင်ကောင်စီးပွားရေး အချက်အချာနေရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ဆန္ဒပြရန် စီစဉ်လာကြ
‘ဟီးဟီး ဟားဟား’ ဟာသရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ယခုလကုန်တွင် ရုံတင်ပြသမည်
အင်စတာဂရမ် အကောင့်ဖွင့်လိုက်သော ဂျူလီယာရောဘတ်